प्रिय बुवाआमा, बालुवा भूमिबाट ढोग गरें । अवश्य आशीर्वाद दिनुभयो होला । मैले पाएको आभास गरें । सन्चै हुनुहुन्छ भन्ने आशा छ ।
श्रीमती पनि सन्चै होलिन् । असीम र अटूट माया ।
यहाँ म कुशल छु । तपाईंहरूमा पनि यही कामना ।
त्रिभुवन विमानस्थलमा जेट विमानको यात्री बनेसँगै मातृभूमिबाट टाढिएँ म । सम्भावनाहरूको राजधानी काठमाडौंमा आफ्ना सुखद पाइलाको दूरी नाप्न खोज्दै गर्दा विकल्पहरू साघुँरिएपछि कतार बाध्यताको कर्मथलो बन्यो । यससँगै स्वदेशमा देखिएका सुकिला र ऊर्वर अभिलाषा मुर्झाए ।
काठमाडौं एयरपोर्टमा विमान ठूलो स्वरले उड्दा धेरैपटक आफैं तर्सिएको छु, कतै परदेशतिर बत्तिनुपर्ने त होइन भनेर । तर परिस्थितिले त्यही डरसँग साक्षात् भेट गराइदियो ।
काठमाडौंको आकाशबाट जहाज जतिजति टाढा पुग्दै थियो, स्वदेशी सामीप्य नजिकिएको आभास भइराख्थ्यो । जहाज स्वदेशको भूमिबाट स्वतन्त्र भएर वेगले उडेपनि म स्वतन्त्र बन्न सकिनँ । मस्तिष्कमा भरिएका सपना, इच्छा र पीडाले साथ छोडेनन् । केही समयको अन्तरालमा आफ्नै देशबाट निकै टाढा पुगिसकेछु ।
कतारको हमाद विमानस्थलमा ज्यान उत्रिएपछि घर छाड्नुको पीडा तथा जहाजको पट्यारलाग्दो थकानले शरीर ऊर्जाहीन बन्यो । तैपनि जीवनको फूल फुलाउनु थियो । त्यसको सुगन्ध परिवारमा छर्नु थियो । त्यसैले परदेशको कर्ममा जोडिएँ । बिस्तारै आफ्नै सहकर्मीको उही नै दिनचर्याले मनलाई तग्रांउँदै लग्यो । शरीर लयमा फर्कने कोशिश गर्‍यो ।
जिन्दगीको सुनौलो भविष्य कल्पिँदै यहाँका आलीशान महल खडा गरिरहँदा इँटा र बालुवा मेरा हरपलका साथी बनेका छन् । दुःख यिनैसँग साट्छु । रिस उठे इँटामाथि पोख्छु । जो नजिक छ उसैसँग त पर्ने रहेछ ठाकठुक र लाग्दो रहेछ माया । एक खालको प्रेम भनौं न ! नभए निर्जीवसँग यसरी सम्बन्ध पनि त रहने थिएन नि ।
एक्लो सन्तान । घरमै नभए स्वदेशकै कुनै ठाउँमा बसेर छोराले केही गरोस् भन्ने आशा तपाईंको थियो नै तर जिन्दगीका केही सीमित चाहना पूरा गर्नका लागि यहाँसम्म आएँ । असीमित चाहना मनमै बाँधिएका छन् ।
यसपालि पनि घर नफर्किदाँ परदेशी छोराले बिर्सियो भन्ने लाग्यो होला । दशैं नजिकिँदा बुवाआमाको अनुहारभरि बेखुशीका उदासीन बिम्ब दौडिँदा हुन् । प्रिय श्रीमतीको प्रेमिल चम्किलो मुहार मेरो प्रतीक्षामा अनवरत बेचैन छ होला । सोच्छु, मेरो अभावमा तपाईंका आँखा नीलो आकाश हेरेर कति भिज्दा हुन् ।
बाल्यकालमा स्कूल पढ्दा बुवाआमा तपाईंले कठिन ज्यामी काम गरेर मलाई पढाउनुभयो । बिर्सेको छैन, मलाई मात्रै खुवाएर तपाईंहरू भोकै सुतेको । अनि अझै झस्काउँछ चारैतिर च्यातिएर टालेका कपडा लगाएर तपाईंहरू काममा हिँडेको । मलाई पोल्छ, गरीबीको चित्र बोकेर हिँड्नुभएका तपाईंहरूलाई खिसिट्युरी गर्दे कानेखुशी गर्ने गरेका ती विरूप मान्छेका चित्रले ।
दशैंमा धेरैजसो घर फर्किँदा अरूबेला शून्य लाग्ने गाउँघर भरिए होलान् । स्वदेशमा यति ठूलो पर्वले खुशी दिइरहँदा परदेशमा बसेर सम्झनामा उदास बन्नुपरेको छ ।
गरीब परिवारमा जन्मेपछि परदेशबाहेक अर्को विकल्प के नै रह्यो र ! खर्चमा मितव्ययी सदा हामीलाई बनिरहनु नै पर्‍यो । जीवनको ३१औं वसन्तमा हिँडिरहँदा थोरै पैसा खर्च गर्न पनि दिमाग सयौंपटक सोचिरहन्छ ।
अग्ला हिमालमा सौम्य भएर बसेका हिउँका ढिक्का कति खुशी छन् है नेपालमा । ती हिमाल आफ्नै हुनुको नाताले पनि अलिकति त हाम्रो ओठमा पनि हाँसो छचल्किनुपर्ने हो तर अहँ हाम्रो हाँसोको बान्की हराएको छ ।
आमाको लामो कपाल पनि ढकमक्क फुलिसक्यो होला । बुवाको अनुहार पनि चाउरिनथाल्यो कि ! बुवालाई घर व्यवहार चलाउन गाह्रो पर्‍यो होला । कतै भनेजस्तो छोराले पैसा पठाएन भनेर तपाईंको मनले थकथकी त मान्दै छैन !
यहाँ सोचेजस्तो कमाइ छैन । छिमेकीहरूले कमाएको देख्दा घरमा तपाईंहरूलाई लाग्ला छोराले सोचेजस्तो पैसा कमाएन भनेर । तर यहाँ कामअनुसारको तलब छैन । सबैको कमाइ एकनासै कहाँ हुँदो रहेछ र ! तर हिम्मत हारेको छैन । एकदिन कसरी हाम्रा खुशीका दिन नफर्किएलान् र !
बुवा, दशैं मनाउन भनेर सदरमुकाम सन्धिखर्कमा आईएमईमार्फत पैसा पठाएको छु । मैले पठाएको पैसाले तपाईंलाई कपडा किन्न नपुगेपनि आमा र श्रीमतीलाई भने किनिदिनुहोला । उधारो भएपनि दशैंमा मीठोमसिनो ल्याउनुहोला । मोबाइल किनेर पठाउँछु भनेको थिएँ तर यसपटक सकिनँ । सकें भने तिहारसम्म पठाउनेछु । अनि फोनमा धीत मरुन्जेल कुरा गरौंला ।
दशैंमा धेरैजसो घर फर्किदाँ अरूबेला शून्य लाग्ने गाउँघर भरिए होलान् । फेसबूकमा शेयर भएका फोटाहरूले यही बुझिरहेको छु मैले । स्वदेशमा यति ठूलो पर्वले खुशी दिइरहँदा परदेशमा बसेर सम्झनामा उदास बन्नुपरेको छ । यसपाला दशैं मान्न गाउँमा को–को आए, सम्भव भयो भने बुहारीलाई चिट्ठी कोर्न लगाउनुहोला ।
यहाँको हावापानी खै के हावापानी ! नेपालको त्यो स्वच्छ चिसो देउराली डाँडाको हावा सोच्दा पनि शरीरमा शीतलताको सञ्चार हुन्छ । मस्तिष्कका कुना–कुनामा त्यो प्रकृतिको हरियाली नाचिदिँदा मेरो मातृभूमिको यादले बेस्सरी चिथोर्छ ।
हरियो वनपाखा, लहरै झुल्न तर्खर गरेका धानका बाला, पहेंलै ढकमक्क फुलेर सुगन्ध छरिरहेका तोरीबारी । सोच्दा पनि यहाँ मन उजाडिन्छ । भौतिक शरीर यो मरूभूमिमा रहेपनि मन भने गाउँमै रहन्छ । आखिर याद न हो, कल्पनामा डुब्दा पनि अपार आनन्द पाउँछु । यो परदेशी जीवन विचित्रको छ । गाउँका सबै एकैपटक भेट्ने सौभाग्य कहिले जुर्ला र !
यो चिट्ठी तपाईंहरूको हातमा पुग्दा जमरा पनि अंकुराइसके होलान् । घरमा सानो हुँदा आमा तपाईंले जमरा छर्दा म कत्ति खुशी हुन्थे है !
हिजोमात्रै एउटा दैनिक अखबार पढ्दै थिए । ‘एकै गाउँका ५०० भन्दा बढी युवा रोजगारीको लागि कतारमा’ शीर्षकमा । यो समाचार पढेपछि मन कुँडियो ।
जिन्दगीको सुनौलो भविष्य कल्पिँदै यहाँका आलीशान महल खडा गरिरहँदा इँटा र बालुवा मेरा हरपलका साथी बनेका छन् । दुःख यिनैसँग साट्छु । रिस उठे इँटामाथि पोख्छु । जो नजिक छ उसैसँग त पर्ने रहेछ ठाकठुक र लाग्दो रहेछ माया ।
आफ्नै गाँउको यो आफ्नै समाचार थियो । नजिकिँदा ठूला पर्वमा गाउँका अधिकांश युवा यतै हुँदा धेरैका परिवारमा खुशीको आयतन पक्कै बढेको छैन होला तर बाध्यताको उपज आज हामी स्वदेशमा रहन सकेनौं । दशैंको छेकोमा आएको यो समाचारले यहाँको तापलाई उछिनेर उकालो ग्राफ चढ्यो । र मनको गर्मी त्यसैगरी उम्लियो ।
मनका कुराहरू लेखेर त कहिल्यै सकिँदैन । लेखुँ भने पनि शब्दहरू नपुग्लान् जस्तो ! खुशी खोज्न र दिने भीडमा हिडिँरहेपनि अझै भेटिनँ । हेरौं, यो यात्राबाट भेटिन्छ/भेटिन्न ।
शायद मैले गल्ती गरें । परिवारलाई यी सारा दुःखका कुरा व्यक्त गरेर । अरू कसलाई पो सुनाऔं ? परिवार नै त हो हरेक घुम्तीमा सँगै रहने । बुवा, आमा र श्रीमतीलाई यो चिट्ठीले स्तब्ध बनायो होला । पढ्ने पाठकलाई पनि त्यसैगरी ।
समय फेरियो तर स्वदेशमा चरम निराशाको बादल हटेर सग्लो नीलो आकाश देखिने परिकल्पना सम्भावनामै सीमित रह्यो । परदेसिएर भविष्य उज्ज्वल बनाउने सपना, थाह छैन कतै यो जुनीमा यो पनि देशकै नियतिसँग मेल खाने त हैन !
तीन वर्षको बसाईं सकिन अझै ३ महिना बाँकी छन् । म घर फर्कंदा चाडपर्व सबैले बिदाइ गरिसकेका हुनेछन् । विदेशको कर्मभूमि आफूले भनेजस्तो त कहाँ हुन्छ र ! कति चाडपर्वमा घरमा सँगै हुन नपाइने हो यही पिरलोले मनलाई सधैं घोचिरहेको हुन्छ ।
मनका कुरा पोख्दै जाँदा चिठी पनि लामो बनिसकेछ । भोलि बिहान सबेरै उठेर ड्युटी जानु छ । अब कलमलाई यहीँ रोक्छु है ।
रातो टीका र जमराले निधार रङ्गाउनुहोला । ज्यान सकुशल रहे भेटौंला ।
लोकान्तर डट्कमको सहयोगमा प्रविधिको उपयोग गरें । र यससँगै अर्को प्रति हुलाकमार्फत गाँउमा पठाएको छु । शायद व्यक्तिगत चिठी घरमै मात्र पठाएको भए राम्रो हुन्थ्यो तर आम नियतिको पर्दापण गर्न सञ्चारबाट संसारमा पुर्‍याउनु युक्तिसंगत ठानें ।